Su'aal: Maxaa keena low Pituitary gland?
Author Topic: Su'aal: Maxaa keena low Pituitary gland? (Read 7711 times)
« on: March 03, 2010, 03:43:25 AM »
dhamaan dhaqtarada somaliyeed hadaa fahantaan su aasheyda igasoo caawiya waxeey tahay iyo maxaa keeno ciladaas maxaana lagu sameyn karaa mahadsanidiin
Re: Su'aal: Maxaa keena low Pituitary gland?
« Reply #1 on: March 12, 2010, 10:08:28 PM »
Pituitary galand waa qanjir yar oo ku dhegan maskaxda soona daaya hormoonno.
Hypopituitarism ama Low pituitary waa shaqada qanjirkan oo yaraata kadibne ay hoos u dhacaan soo denynta hormoonnadaas.
Qanjirkaan waxaa loo yaqaannaa aabaha qanjirrada ahmiyadda uu leeyahay dartiisa iyo wuxuu xukumaa shaqanynta qajirrada kale ee jirka.
Qanjirkaan wuxuu soo daayaa 8 hormoon oo muhiim u ah bini'aadanka waxayna kala yihiin:
ACTH: waa hormoonka ka shaqeysiiya qanjir kale oo ku dul yaala kilida (Adrenal Gland)
TSH: waa hormoonka ka shaqaysiiya qanjirka toroodhka (Thyroid gland)
PRL: waa hormoonka ku shaqada leh soo saarista caanaha naaska
GH: waa hormoonka ku shaqada leh korriinka
FSH: waa hormoonka dumarnimada.
LH: waa hormoonka ragannimada.
Oxytocin: waa hormoonka ku shaqada leh foosha iyo kogidda minka.
ADH: waa hormoonka ku shaqada leh in jirka biyaha ku soo celiyo.
Hadii shaqada qanjirkaan ay yaraato waxaa yaraanaya hormoonnadaan oo dhan iyo qanjirro kale haqadooda taasoo aad muhiim ugu ah nolosha.
Waxaa keeni kara hawlgabidda qanjirka pituitary:
1- Buro qanjireed
2- Caabuq sida: qoorgooye, maskaxda oo malaxaysata iyo IWM
3- Qulqulka dhiiga oo ku yaraada qanjirka
4- Shil ama dhaawac gaaray qanjirka
5- Cillad lagu dhashay (congenital hypopituitarism)
Daawenta cudurkaan waxay ku xirantahay in la ogaado 5-taas shey midkii ka mid ah oo keenay, kadibne sida ugu haboon lagu xalliyo, haddii buro tahay in la qalo, hadii caabuq tahay in antibiotic la siiyo...
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah waad na soo weydiin kartaa
« Reply #2 on: May 03, 2010, 04:51:38 AM »
waad mahadsan tahay doctor jawaabtaada wanaagsan//// waxaa igu dhacay shil ama dhaawac dhaqaatiirta waxeey dheheen weey xirantay patuitary glad daawo ma leh marka waxaan kugu caawi karno maleh maxaad ugu waaci laheeyd sida ugu macquulsan oon ubad u qaadi karaa waad mahadsan tahay fadlan email ayaan jeclaan lahaa in aan kuu la xiriiro
Views: 11997 July 02, 2017, 11:30:43 AM
Views: 96407 August 23, 2015, 02:14:13 PM
Views: 57124 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 21453 December 05, 2015, 01:19:38 PM
Views: 21922 April 06, 2016, 04:35:38 PM